Salak any Thailand ~ Journey-Assist -Mandrohy voankazo. Vokatry ny Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Salak any Thailandy
Salak, voankazo bibilava (La kham)
Inona no tiana ahitra?
Amin'ny vanim-potoana io, dia manodidina ny 40 ka hatramin'ny 60 baht isaky ny 1 kg.
Mey ka hatramin'ny Aogositra.
Ahoana ny fitehirizana ny hena
Na izany aza, misy kely foana, fa ny mety tsy fifandeferana manokana amin'ny singa iray na singa iray avy amin'ny fandrafetana ny voankazo.
Mora diovina amin'ny tanana ..
Tena mahaliana ilay tsiro .. mahafinaritra na.
fa ny fofona mivaingana mampiavaka azy dia tsy namela azy hihinana lavitra).